Huawei Mate 9: Raha tena tianao ny 5.9in Phablet? - News Fitsipika
Large-hanakona finday avo lenta manantena mba hameno ny banga navelan'ny Samsung ny mipoaka Note 7 ary hihamafy Huawei toy ny Premium handset mpanamboatra
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Huawei Mate 9: Raha tena tianao ny 5.9in phablet?” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com ny alakamisy faha-3 Novambra 2016 13.30 UTC
Huawei vaovao goavana finday avo lenta manana 5.9in efijery. Fa tena lehibe anefa no tena tianao ny finday avo lenta ho?
Phablets - finday avo lenta miaraka amin'ny efijery habe ny 5.5in - Lasa bebe kokoa malaza, mampiseho ny fironana avy amin'ny fifindra-monina aziatika niaviany ho any Etazonia sy Eoropa. Na Apple, malaza ho an'ny madinika finday avo lenta, Nandefa phablet in 2014 miaraka amin'ny iPhone 6 Bebe Kokoa. Fa vitsy phablets no namelatra ny efijery mihoatra 5.7in.
Ny vaovao 699 € (£ 621) Huawei Mate 9 manana 5.9in HD feno Display, mizara roa ny fakan-tsary ao ambadiky, dia 7.9mm matevina sy mitantana ny orinasa farany dikan-ny namboarina Android 7.0 Nougat antsoina hoe fihetseham-po UI 5. Izany koa ny farany Huawei processeur, izay milaza ny orinasa dia 20% mahery vaika kokoa noho ny teo aloha taranaka sy mahery amin'ny multi-fototra asa noho ny Apple, Samsung na ny farany Qualcomm processors.
Fa ny fanontaniana raha mbola mpividy any Etazonia sy Eoropa te efijery lehibe toy izany. Previous iterations ny Vady tsipika tsy namidy faobe amin'ny fivarotana, izay midika hoe ny Mate 9 no voalohany ny Huawei ny Super-salantsalany phablets mba fomba ofisialy hakodian'ny ao amin'ny UK.
Mate 9 dia ny manaraka ny Huawei iteration ny mpiara-hoatr'izany tamin'ny fiaviana roa Leica fakan-tsary ao ambadika. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
ny tsy fahombiazana ny Samsung ny Note 7, izay andrasana ho lehibe ao amin'ny phablet mpivarotra sokajy, Huawei sy ny hafa dia manana fahafahana mba hameno ny banga. Ny hafa kosa dia nifantoka tamin'ny faran'ny ny kely ny phablet sehatra, amin'ny Google ny Pixel XL manana 5.5in efijery, Huawei dia niezaka hiatrehana mahantra bateria fiainana sy ny Fampitonena ny ny finday rehefa mandeha ny fotoana.
Ny manao izany, ny Vady 9 Manana bateria 4,000mAh lehibe izany momba 500mAh lehibe kokoa noho ny ankamaroan'ny mahazatra phablets, anisan'izany ny Pixel XL, niaraka tamin'ny fianarana mifototra amin'ny rafitra, izay mitantana an-toerana an-telefaonina sy ny fomba fampiasana detects, fanomanana Apps izay tokony ampiasaina amin'ny fotoana sasany ny andro mba hanomboka haingana kokoa ny fiainana raha tsy impacting bateria na fampisehoana.
Milaza ny rafitra Huawei dia ho afaka ihany koa ny mihazakazaka fikojakojana tapaka nandritra ny alina, manamarina ny cruft sy hitandrina ny telefaonina vaovao mihazakazaka toy ny roa taona teo ny tsipika. Raha oharina amin'ny teo aloha dikan 'ny orinasa ny rindrankajy, dia antenaina ho mihazakazaka 80% haingana taorian'ny herintaona.
Huawei ny fihetseham-po vaovao UI 5 feo, ohatra, midina ny sary customization ny fitsipika Android, izay ny orinasa fanantenana dia hahaliana bebe kokoa ny tandrefana mpividy. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny Vady 9 ny lehibe bateria Huawei koa ny fifadian-kanina vaovao-mamaly ny rafitra, izay tahaka ny Dash OnePlus Niandraikitra, manosika ny sasany amin'ireo elektronika takiana mba handidy ny bateria soa aman-tsara ao amin'ny avo malefaka tao an-dovia. Ny orinasa vaovao milaza fa rafitra fiampangana dia ho afaka ny hahatratra 58% bateria fahaiza-in 30 minitra, amin'ny feno anjara-raharaha ao amin'ny 90 minitra.
"Battery fitantanana ny fikarohana sy ny fampandrosoana dia tanterahina amin'ny trano, ary nomena fivoaran'ny toe-draharaha vao haingana isika efa upped ny fikarohana sy ny fampandrosoana mandany mba hahazoana antoka fa toy izany koa na inona na inona mety hitranga. Hitoetra any herintaona izahay fifanintsanana sy ny fanaovana fitiliana singa toy ny vatoaratra na anatiny sy ety ivelany alohan'ny amin'ny amidy,"Hoy Ed Gemmell, Huawei ny mpanjifa fandraharahana vondrona talen'ny fifandraisana.
Tablet varotra, miaraka amin'ny PC varotra, ny fihenan'ny, toy ny olona maro kokoa mampiasa ny finday avo lenta ho toy ny voalohany indrindra computing fitaovana. Fa na Eoropeana sy Amerikana mpanjifa haka ny finday avo lenta toy izany lehibe Mbola ho hita.
Ny fanontana voafetra Mate 9 Porsche Design Variant, kely iray 5.5in QUAD HD curved lamba sy ny mitovy amin'izany ihany koa fepetra arahana ho hita ao amin'ny UK sy EU niaritra € 1.395 (£ 1.238), fa tsy any Etazonia.
A ilany-by-lafiny haben'ny raha oharina amin'ny Google Pixel XL eo ankavanana, ny vaovao Mate Huawei 9 eo ankavanana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
39289	3 Android, Article, Huawei, Finday, News, Phablets, Samuel Gibbs, Smartphone, Teknolojia, UK Teknolojia
← Google Pixel Review Amazon Echo: Ny voalohany 13 Zavatra to Try →